Apple One More Thing Event မှာဘာတွေကိုမိတ်ဆက်သွားလဲ?? — Anycall Mobile
Apple One More Thing Event မှာဘာတွေကိုမိတ်ဆက်သွားလဲ??
By liam November 11, 20204Mins Read
Apple ကတော့ ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်း ၁၂ ခွဲအချိန်လောက်တုန်းက One More Thing Event အသစ်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အရင် စက်တင်ဘာလ နဲ့ အောက်တိုဘာလ Apple Event မှာ Apple Watches, iPhones, တွေနဲ့ တစ်ခြား product အသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးသွားပြီမို့လို့ ဒီ Event အသစ်မှာတော့ M1 SoC အသစ်နဲ့ MacBook Air ၊ 13-inch MacBook Pro နဲ့ Mac Mini တို့ကို Apple ကနေ မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
ပထမဆုံး MacBook တွေအကြောင်းမပြောခင် M1 SoC အသစ်အကြောင်းကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်…
ဒီ M1 SoC ကိုတော့ Apple က ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး CPU နဲ့ GPU ပါတဲ့ SoC လို့ မိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ CPU ပါ။ CPU နဲ့ပတ်သက်ပြီး Apple က ကြွားလုံးထုတ်သွားတာက Performance လည်းကောင်းကောင်းနဲ့ Power စားတာလည်း အရင်က Intel CPU တွေထက် လုံးဝသက်သာမယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ Apple ဒီလိုပြောနိုင်တာက ဘာလို့လဲဆိုရင် ဒီ M1 SoC က အခုနောက်ဆုံး 5nm Process အသစ်ကို အသုံးပြုထားတာကြောင့်မို့လို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီ 5nm ဆိုတဲ့ Size လေးအတွင်းမှာ Transistor ပေါင်း 16 Billions တောင် ပါဦးမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း Performance ကောင်းကောင်းကို Battery သက်သက်သာသာနဲ့ လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ Apple ပြောတာက မှားနိုင်ဖွယ်မရှိပါဘူး။
နောက်တစ်ခု အနေနဲ့က GPU ပါ။ ဒီ M1 ရဲ့ GPU က 8 Core GPU ကိုသုံးထားပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ Processor တွေမှာ တစ်ခါတည်းပါလာတဲ့ Integrated GPU တွေက သိပ်ပြီး Perform လုပ်ပေးနိုင်လေ့မရှိပါဘူး။ ဒါကို Apple ကချပြပြီးတော့ သူတို့ M1 SoC ရဲ့ Integrated GPU ဟာ လက်ရှိဈေးကွက်ထဲက Integrated GPU တွေထဲမှာ အမြန်ဆုံး Performance အကောင်းဆုံး GPU ပါလို့ အခိုင်အမာပြောထားပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ M1 SoC ရဲ့ Power Efficiency ကို မြင်အောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင် ဒီ M1 SoC ရဲ့ Power Comsumption Rate ဟာ Dual Core Processor ရဲ့ Power Consumption Rate လောက်ပဲရှိပါတယ်တဲ့။
MacBook Air ကတော့ အပေါ်မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ M1 SoC အသစ်နဲ့အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒီ SoC အသစ်ကြောင့် Graphic ပိုင်းမှာ5times ၊ CPU မှာ 3.5 times ၊ machine learning မှာ9times အထိပိုမြန်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Battery Life မှာလည်း MacBook Air တွေထဲမှာ အကြာဆုံး 18 hours Battery Life ပေးနိုင်တယ်လို့ Apple ကဆိုထားပါတယ်။ MacBook Air (2020)Battery Life ကတော့ပိုခံလာပေမယ့်လည်း Cooling Fan တော့ပါလာခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။
တစ်ခြား Specs တွေအနေနဲ့
MacBook Air 2020 မှာ P3 wide color gamut ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ 13.3-inch Retina Display ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ Ram နဲ့ Storage ပိုင်းမှာတော့ အရင်ကထက် ၂ ဆပိုမြန်တဲ့ 16GB of RAM နဲ့ 2TB of SSD storage တို့ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ OS မှာတော့ macOS Big Sur နဲ့ Run ပေးထားပါတယ်။
Connectivity ပိုင်းအတွက်တော့ အားသွင်းဖို့ USB-C ports နှစ်ခု ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး တစ်ခြား DisplayPort ၊ Thunderbolt3၊ USB 3.1 Gen2တို့ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Laptop ရဲ့ညာဘက်မှာ Audio Jack ကိုလည်းတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ခြား Features တွေအနေနဲ့ Touch ID, Bluetooth 5.0, Wi-Fi6တို့ပါဝင်ထားပါတယ်။
MacBook Pro မှာလည်း Apple M1 SoC အသစ်နဲ့ပဲအားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။ အခု MacBook Pro အသစ်ကတော့ အရင် Intel processor သုံးထားတဲ့ MacBook Pro နဲ့ယှဉ်ရင် CPU မှာ 2.8 times ၊ GPU မှာ 5times နဲ့ Machine Learning မှာတော့ 11times အထိပိုမြန်လာပါတယ်။ Battery Life မှာ Web Browsing အတွက် 17 hours နဲ့ Video Playback မှာ 20 hours အထိပေးနိုင်တယ်လို့ Apple ကဆိုထားတဲ့အတွက် ဒီ MacBook Pro ဟာ Mac တွေထဲမှာ အကြာဆုံး Battery Life ရှိတဲ့ Mac ဖြစ်လာပါတယ်။
MacBook Pro ရဲ့ Specs တွေကတော့
MacBook Air 2020 လိုပဲ P3 wide color gamut ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ 13.3-inch Retina Display ကိုသုံးပေးထားပြီး Touch Barပါတဲ့ Magic Keyboard နဲ့တွဲပေးထားပါတယ်။ Ram မှာ 8GBRAM ၊ 16GB RAM ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရွေးလို့ရမှာဖြစ်ပြီး Storage မှာတော့ 2TB အထိရွေးချယ်လို့ရမှာပါ။ OS မှာတော့ macOS Big Sur နဲ့ Run ပေးထားပါတယ်။
Connectivity ပိုင်အတွက်တော့ Thunderbolt ၂ ပေါက် ၊ USB4Type C နှစ်ပေါက်နဲ့ Audio Jack တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ခြား Features တွေအနေနဲ့ Air4လို Touch ID, Bluetooth 5.0, Wi-Fi6တို့ပါဝင်ထားပါတယ်။
ဒီ Mac Mini ကတော့ အရင် ၂၀၁၈ ကတည်းကထွက်ခဲ့တဲ့ Mac mini ထက်ပိုသက်သာတဲ့ဈေးနဲ့ထွက်လာပါတယ်။ ဒီ Mac Mini မှာလည်း M1 SoC အသစ်နဲ့ အားဖြည့်ပေးထားပြီး ဒီ SoC ကြောင့်ပဲ CPU မှာ 3x ၊ GPU ပိုင်းမှာ 6x အထိပိုတိုးတက်လာပါတယ်။ ။ Ram နဲ့ Storage ပိုင်းမှာတော့ အများဆုံး 16GB of RAM နဲ့ 2TB of SSD storage အထိထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
သူ့မှာလည်း Connectivity ပိုင်းအတွက် USB4Type-C ports နှစ်ပေါက် ၊ Thunderbolt (up to 40 Gbps) တစ်ပေါက်နဲ့ USB-A 3.1 Gen2ports (up to 10 Gbps) နှစ်ပေါက် တို့ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ထပ် 4K/60Hz output အတွက် HDMI 2.0 port နဲ့ 6K/60Hz monitor အတွက် DisplayPort တို့လည်းပါဝင်ထားပါတယ်။ OS မှာတော့ macOS Big Sur နဲ့ Run ပေးထားပါတယ်။ MacOS ကို Monitor ကောင်းကောင်းနဲ့သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ Mac Mini က ရွေးချယ်စရာဖြစ်လာမှာပါ။
MacBook Air (2020) – $999 ( မြန်မာငွေ ၁၃ သိန်းဝန်းကျင်)
13-inch MacBook Pro – $1299 ( မြန်မာငွေ ၁၇ သိန်းဝန်းကျင်) နဲ့
Mac mini ကတော့ $699 ( မြန်မာငွေ ၉ သိန်းဝန်းကျင်) ဆိုပြီး အသီးသီးကျသင့်လာပါတယ်။ ဒီ Mac တွေအားလုံးကိုတော့ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။